news-so Archives - Containing Death Penalty
Category Archives: news-so
15 January 2020: Midowga Yurub ayaa si adag uga hor-yimid xukuno dil ah oo shalay ay fulisay Xukuumada Somaliland ee uu hogaamiyo Madaxweyne Muuse Biixi. Nicolas Berlanga Martinez, Safiirka Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya ayaa war ka soo saaray xukunadii dilka ...
15 January 2020 Xeer Ilaalinta Somaliland ayaa waxay faah faahin ka bixisay lixdii nin ee saaka lagu toogtay fagaaraha Mandhera ee duleedka Magaalada Berbera. Qoraal ka soo baxay Xafiiska Xeer Ilaalinta Guud ee Somaliland ayaa lagu sheegay in raggaasi loo ...
31 december 2019: Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa todoba nin oo lagu eedeeyey inay ka tirsanyihiin Al-Shabaab ku xukuntay dil toogasho ah, kadib markii maanta ay soo gaba-gabeysay dhagaysiga kiiskooda oo mudo soo socday. Seddax ka mid ah ...
7 dicembre 2019 Xasan Muuse Warsame iyo Xasan Xuseen Maxamed ayaa loo heystaa in ay si bareer ah ugu fureen rasaas laba gabdhood oo wada saarnaa Bajaaj mareysay bar kontorool oo ay ku qornaayeen 07-da bishii sagaalaad ee Sanadkan. Xasan ...
24 November 2019: Maxkamadda darajada Koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay xukun ku riddey shaqsi la sheegay in 23-kii May, 2019 ciidamada amniga qabteen isaga oo isku qarxin rabay hoggaanka Ahlu-sunna Waljameeca, xilli ay ku sugnaayeen munaasabad ka ...
Maxkamada Ciidamada oo Dil Ku xukuntay Nin Ku Eedaysan Weerar Galkacayo Ka Dhacay
21 November 2019: Maxkamada Darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa Shalay xukun dil ah ku ridday C/llaahi Cali Aaden oo qeyb ka ahaa weerar Sanad ka hor lagu qaaday Xarun uu Magaalada Gaalkacyo ku lahaa Cabduweli Sheekh ...
Maxkamada Ciidanka Qalabka-sida oo 3 Dhalinyaro ah Ku Xukuntey Dil Toogasho
Maxkamadda Darajada 1aad ee Ciidamada Qalabka sida ayaa xukun dil ah ku ridday xubno ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasoo kala ah Shuceyb Cabdullaahi Maxamed iyo Saadaq Cabdijabaar Xuseen. Labadan dhalinyaro ayaa loo heystaa inay ka qeyb qaateen dilal ka dhacay magaalada ...
Maxkamadda Ciidamada Puntland Oo Dil Toogasho Ah Ku Fulisay 5 Ruux
7 November 2019: Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee dowlad Goboleedka Puntland ayaa Maanta oo Khamiis ah xukun Dil toogasho ah ku fulisay Rag ka tirsan Al-shabaab iyo Daacish. Raggan toogashada lagu fuliyay ayaa gaarayay ilaa 5 ruux, kuwaasi oo muddo ...
Rag saaka lagu riday xukunno iskugu jira dil iyo xabsi daa’in
30 October 2019: Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saakay xukunno kala duwan ku riday rag gaaraya seddax ruux. Ugu horeyn Maxkamadda ayaa Cali Axmed Guure oo maqan iyo Nuur Ibraahim Mahad Alle ku riday xukun dil toogasho ah. ...
Maxkamada Ciidanka Qalabka Sida ayaa Saakay dil toogasho ku fulisay labo nin oo horay loogu soo eedeeyay in ay ka tirsanaayeen Al Shabaab. Labadaan ruux ayaa xeer ilaalintu sheegtay in ay dilal iyo qaraxyo ka geystay Magaalada Muqdisho, kuwaas oo ...